जाग नेपाल: January 2012
केटाकेटी छ“दा हामीबीच कसले बढी मुलुकको नाम जानको छ भन्ने होड चल्थ्यो । हामीमध्येका केहीले देशहरुको नाम बढाउन भन्थ्यौ“– भारत, इण्डिया, हिन्दूस्तान । अर्कोले झन् विश्ववेत्ता भएर भन्थ्यौ“– बेलायत, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त अधिराज्य (युके), इंग्ल्याण्ड । नेपाल छ“दासम्म मलाई पनि लाग्थ्यो बेलायत (ब्रिटेन), युके, इंग्ल्याण्ड एकै देश हुन् तर यहा“ आएपछि पत्ता लाग्यो होइन रहेछ । इङ्ल्याण्ड, वेल्स र स्कटल्याण्ड मिलेर ग्रेट ब्रिटेन बन्दोरहेछ । त्यसमा उत्तरी आयरल्याड मिसिएपछि बल्ल संयुक्त अधिराज्य (युके) बन्दोरहेछ । इंल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड सबैको आ–आफ्नै झण्डा, आ–आफ्नै राष्ट्रिय गान रहेछ । विश्वकप, ओलम्पिक वा यूरोपियन कपहरुमा खेल्दा यी चारवटैले अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गर्दारहेछन् । त्यसमाथि पनि स्कटल्याण्ड र इंग्ल्याण्डबासीबीच त आगो–पानीको सम्बन्ध हु“दोरहेछ ।
आफूलाई संसारकै श्रेष्ठ ठान्ने अंग्रेजहरुको देशमा छु म अहिले । जहा“ मजस्ता बाहिरबाट आएकाहरु एलिएन हुन् । करिब एक लाख नेपाली एलियनहरु छन यहा“ । एलियनहरु रैथाने अंग्रेज हुन खोज्दैछन् । कृष्णहरु अहिले कृष् भएजस्तैगरी । अंगे्रजहरुले नेपाली नाम एकैपटकमा सर्लक्क उच्चारण गर्न नसक्नु बेग्लै कुरा हो तर हामी नेपालीको काम उनीहरुले जसो भन्यो त्यसै बनाइदिने त होइन होला । हिथ्रो एयरपोर्टमा लिन आएको ट्याक्सी ड्राइभरले यो पंक्तिकारको नाम एनओआरआरआइएस (नोरिस) लेखेर धुइ“पाताल खोज्दैमा नोरिस हुने हो कि ? शिक्षिका मार्सिया भन्छिन्, “मैले चारपटकमा मात्र तिम्रो नाम ठीकस“ग भन्न सके“” । हो, नेपाली लोकदोहोरी सवालजवाफ गाउन सक्ने अंग्रेजलाई तीन÷चारपटकमा त जस्तो नाम पनि आउ“दो भइहाल्छ नि ।
यूरोपियनहरु आलोचना गर्छन् – आइतबार यूरोपभर गरिब मानिसरुले समेत नया“÷सुकिलो लुगा लाउ“छन् र दिन खुशी र उज्यालो हुन्छ तर अंग्रेजहरु धनी मानिसहरु समेत पुरानो लुगा लगाउ“न् र दिन घुर्मैलो हुन्छ । त्यसो त यूरोपियनहरुले खिसि गर्ने कुरा धेरै छन् अंग्रेजहरुका । जस्तो कि बिहान सबेरै ५ बजे मीठो निन्द्रा बिथोल्दै कसैले चिया ल्याइदियो भने रिसले नबा“उठिनु बरु ‘धन्यवाद यो समयमा चिया खान मलाई असाध्य मन लाग्छ भन्नु’ । चिया ल्याउने फर्किसकेपछि भने ट्वाइलेटमा खन्याइदिए पनि हुन्छ । चिनी नहालेको, दूध हालेर चियाको स्वाद नै हराएको किन नहोस् प्रतिव्यक्ति दिनको औसत ३.३९ कप चिया र १.६५ कप चिया खाने अंग्रेजहरुको बानी छ । त्यसैले आफ्नो घरमा आएकाहरुले चिया खान इन्कार गरे अंग्रेजहरुले तपाईलाई राम्रो ठान्दैनन् ।
अंग्रेजहरुले तपाईलाई माया गर्ने छन् किनकि कुकुर, बिरालोलाई पनि उनीहरुले माया गरेकै छन् । भुस्याहा कुकुरहरुको घर नभएको बिजोग देखेर सन् १८६० मा मेरी टेलबाइले बाटारसीमा खोलेको कुकुर घरमा २७ लाख ३४ हजार कुकुर छन् । कर नतिर्ने २ करोड ६६ लाख माछा, ७७ लाख बिरालो, ६७ लाख कुकुर, १५ लाख खरायो अंग्रेजहरुले पालेकै छन्, कर पनि तिर्ने खर्च पनि बेलायतमै गर्ने केही लाख प्रवासीलाई पाल्दा अंग्रेजहरुलाई नाफा नै हुन्छ ।
सम्झौता अंग्रेज हुनुको विशेषता नै हो । जस्तो कि पार्टीमा जाने तर अञ्जानसित चुइ“क्क नबोल्ने । सा“झ ६ बजेअघि ५ मिनेटमा कुनै पनि ड्रिंक्स पिउन नसक्नु तर ६ बजेपछि ५ मिनेटमै स्वाट्ट पार्नु पनि सम्झौतै हो । तथ्याङ्क भन्छ एक अंग्रेजले एक वर्षमा ९९.४ लिटर रक्सी पिउ“छ । एक घण्टाको फिल्मको लागि तीन घण्टा लाममा बस्नु । लाममा बस्ने मामिलामा अंग्रेजहरु नामूद नै छन् । जर्ज माइक लेख्छन् – बस स्टपमा एकजना हु“दा पनि अंग्रेजहरु लाइनमा बसिरहन्छन् । त्यसो त सप्ताहन्तमा बीचमा, सपिङ मलको काउण्टरमा, चिया÷कफी सपमा जतातै लाम नै हुन्छ । मानिसहरुसित घुमफिरमा जा“दा घण्टौ“ मुखमा ताल्चा लगाउन सक्नु तर कुकुरसित मिनेटपिच्छे बोलिरहनु पनि सम्झौतै हो क्यारे ।
अंग्रेजहरुसित बोल्नलाई तीन वर्षसम्म एउटै शब्द जाने हुन्छ रे । नाइस । जेमा पनि चल्ने । अंग्रेजहरुले फिरङ्गीहरुलाई असजिलो होस् भनेर रे डाक्टरजति सबै हार्ली रोडमा, वकिल जति सबै लिंकन इनफिल्डमा, किताब पसल जति सबै चेरिङ क्रस रोडमा, पत्रिका जति फ्लिीट स्ट्रीटमा, धोबी जति स्याभिली रोमा, कार बिक्री जति सबै पोर्टल्याण्ड स्ट्रिटमा, थियटर जति पिकाडेली सर्कसमा, सिनेमा लेस्टर स्क्वाएरमा राखेका । त्यसमाथि एउटै नाम गरेका ठाउ“ बीसवटा भन्दा बढी । एउटै नामको पछाडि रोड, सर्कस, वे, लेन, ग्राउण्ड, कमन, स्ट्रिट, पार्क के के मात्र जोडेका ?
यहा“ जन्मिने ४० प्रतिशत केटाकेटीका आमा अविवाहित छन् । वर्षमा ३ लाख १० हजार विवाह हुन्छन् १ लाख ६१ हजार सम्बन्ध विच्छेद । स्वतन्त्रताको वकालत गर्नेहरु पाखण्डी बन्नुलाई आदर्श ठान्छन् । अंग्रेजहरुको पाखण्डीपनबारे एउटा कथा छ । कुनै पबमा अंग्रेज उनका गैर अंग्रेज साथी पिउन गएछन् । केही समयपछि एक्कासी पबमा गोली चलेछ । गैरअंग्रेज गोली चल्दा कुर्सिमै रहेछन् भने अंग्रेज साथी भागेर कता पुगेछन् । गोली रोकिएपछि ती कता भागेका साथीले सम्हालि“दै गैर अंग्रेजलाई भनेछन् – ओहो तिमी त धेरै डराएछौ । कुर्सिबाट भाग्न पनि सकेनछौ ।
हाउ टू वी एन एलियनका लेखक जर्ज माइक भन्छन् – बरु कैदमा राखिएको कैदी सप्रेर मान्छे बन्दा तर इंग्ल्याण्डमा बाहिरबाट आएकाहरु कहिल्यै अंग्रेज बन्न सक्दैनन्, बेग्लै कुरा हो उनीहरु ब्रिटिश बन्न सक्लान् ।
माइकको सल्लाह नपढेर होला कतिपय नेपालीहरु अंग्रेज हुने होडमा छन् । जो असम्भव छ ।
Posted by Naresh at 9:22 AM No comments:
बन्न नसकेको समाचार
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मात्र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को भारत भ्रमण चर्चामा थिएन । बरोबर भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिने त नेपाली कम्युनिष्टहरुको परम्परा नै भइगो । भूमिगत सशस्त्र युद्धकालमा भारतसित लड्न ‘ए’ देखि ‘जेड’ सम्म सबै आकारका सुरुङ खन्न लगाउने माओवादी सेनाका सुप्रिम कमाण्डरका हिसाबले पनि त्यो भ्रमण चासोको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला गर्नैपर्ने भारत भ्रमणको ‘बाध्यता’लाई ओलम्पिक समापन समारोहमा चीन पुगेर पञ्छाएको ‘सगौरव प्रष्टीकरण’ पार्टीपंक्तिमा दिए पनि ‘सत्ता सन्तुलन’ गर्न त्यस भ्रमणलाई खुलेर आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भन्ने साहस उनमा थिएन । यस्तो राजनीतिक र कुटनीतिक विशिष्टताका साथ भएको भारत भ्रमणमा सम्मिलित हुनु मेरा लागि भने व्यावसायिक करियरमा महत्वपूर्ण थियो ।
पंक्तिकार कार्यरत गोरखापत्र दैनिकका तत्कालीन प्रधानसम्पादक कृष्ण श्रेष्ठ नवप्रतिभालाई ‘ब्रेक’ दिनुपर्छ भन्नेमा थिए भने भारतसित ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध भएका प्रबन्धसम्पादक सीताराम अग्रहरि भने आफैँ जाने दाउमा थिए । कार्यकारी अधिकारसम्पन्न संस्थानका अध्यक्ष ओम शर्माले पंक्तिकारको पक्षमा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि अन्ततः मेरो भ्रमण रोक्ने कोही भएन । अघिल्लो वर्ष राजाको कतार भ्रमणमा सम्मिलित तत्कालीन प्रमुख समाचारदाता किशोर केसीको प्रायजसो समाचार आफैँले समन्वय गरेकोले म मानसिकरुपमा चुनौती ब्यहोर्न तयार थिएँ । त्यसमाथि अंग्रेजी र प्रविधिमा दक्ष प्रधानसम्पादक श्रेष्ठ र व्यापारिक रिपोर्टिङमा काबिल सहकर्मी ओम थापाले साथ दिने भएपछि मलाई हाइसञ्चो नै थियो ।
सेप्टेम्बर १४ मा औपचारिक भ्रमण शुरु भो । सञ्चारकर्मीको टोलीमा ‘सरकारी कर्मचारी’ मात्र थिए । नेपाल टेलिभिजनका राजेन्द्रराज तिमिल्सिना (राराति) र क्यामेराम्यान सुरेश मानन्धर, राष्ट्रिय समाचार समितिका एकराज पाठक, रेडियो नेपालका विष्णु सापकोटा, सूचना विभागका वसन्त चित्रकार र गोरखापत्रबाट यस पंक्तिकार । सापकोटा र पंक्तिकारबाहेक सबै थिए सरकारी भ्रमणका खग्गु । कान्तिपुरका गोपाल खनाल र अन्नपूर्ण पोस्टका अनिल गिरी त्यतिबेला दिल्लीमै बस्थे । रिपोटर्स क्लबका सदाबहार अध्यक्ष ऋषि धमला, एभेन्युज, सगरमाथा र नेपाल वान टेलिभिजनका पत्रकार आफ्नै बन्दोबस्तमा सामेल भए पनि सरकारी भोजन, आवास र सवारीको सुविधा लिएकै देखिन्थे । नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट सरकारी टोलीमा सामेल रमेश विष्टलाई समाचार कतै पठाउनु नपर्ने भएकाले बडो सुविस्ता थियो ।
भ्रमण तालिकालाई कहिले पछ्याउँदै कहिले पछि पार्दै भोलिपल्ट सबेरैदेखि भ्रमण शुरु भो । पत्रकारहरुलाई विनियोजित दुई सवारीमध्ये एक नेटिभीका पत्रकारहरुले कब्जा गरिहाले दोस्रोमा कहिले ऋषि धमला त कहिले हामीले काम चलायौँ । दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासको कमजोर समन्वय बाबजूद प्रधानमन्त्रीलाई पछ्याउनु थियो । कर्मचारीहरुको कहिले गाली, कहिले घुर्की, कहिले दयाको पात्र बन्न मञ्जुर थियौँ किनकि समाचार छुटाउनु सरकारी मिडियाका लागि अपराध जो थियो । त्यसमाथि राससका पाठक र रेडियोका सापकोटालाई नेपाली टाइप गर्न नआउने भएकाले उनीहरुको टाइपिस्ट पनि आफैँ बन्नु थियो । अल्प प्राविधिक ज्ञानी मेरा लागि होटलमा वाइफाई जोड्नु मुश्किल थिएन तर त्यसको उपभोग गरेवापत पाँचतारे होटलको आकाश छुने बिल आफ्नै थाप्लोमा आइलाग्ला कि भन्ने चाहिँ अग्घोरै चिन्ता थियो । त्यसैले धेरैजसो दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासकै कम्प्युटर र इन्टरनेट चलाइयो ।
यस्तैमा दिल्लीको बाह्रखम्बा रोडस्थित नेपाली दूताबासमा प्रधानमन्त्री जाने खबर आयो । कार्यक्रम थियो भारतमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने । दूताबास परिसरमा टाँगिएको पालभित्र आयोजित सो कार्यक्रममा उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा केही नयाँ शब्दमा परम्परागत प्रवचन दिए । उनले बिर्सेनन् नेपालको जनयुद्ध र जनआन्दोलन सफल बनाउन भारतमा रहेका नेपालीहरुको योगदानको गुणगान गाउन । तर उनले छुटाए सालभरि दुःखगरि कमाएको पैसा लिएर चाडबाडमा घर फर्किँदा नाकामा लुटिने नेपालीहरुको पीडा । भारतमा श्रमिकका रुपमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरुको ब्यथा, पीर, मर्का र हेलाँहाचो । त्यसो त त्यसअघि र पछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि उनीहरुलाई सम्झेकै कहाँ छन् र ? प्रधानमन्त्रीहरुको वार्तामा कुल्ली, बहादुर, दरबान, कान्छा र मुम्बईमा बेचिएका चेलीहरुको कुरा सुहाउँदिलो पनि कहाँ होला र ?
कार्यक्रम सकियो । प्रधानमन्त्री हिँडे दूताबासको निरीक्षण गर्न । दूताबासको माथिल्लो तल्लामा अर्को कार्यक्रम थियो प्रधानमन्त्रीको । तर कार्यक्रम अगावै उनी एउटा कोठामा सुटुक्क पसे । उनका स्वकीय सचिव समीर दाहाल, भारतस्थित माओवादीसम्वद्ध संगठनका इञ्चार्ज लक्ष्मणदत्त पन्त मात्र थिए उनको साथमा । बन्द ढोकाभित्र को थियो ? के कुरा भयो ? बाहिरकालाई पत्तो हुने कुरो भएन । धेरै पत्रकारहरु त माथिल्लो तल्लामा प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । पाठक, सापकोटा र म पनि प्रधानमन्त्रीले को भेट्दैछन् भनेर पछि लागेका थिएनौँ । संयोगले त्यो कोठा नजिक पुगेका थियौँ । जनयुद्धमा फौजी कमाण्डरसमेत भइसकेका रेडियो नेपालका सापकोटा र पन्तको पहिल्यै चिनाजान रहेछ । उनैले मलाई पन्तसित चिनाए । प्रधानमन्त्री निस्केर हिँडेपछि स्वकीय सचिव समीर दाहालले सापकोटा र मलाई इशारा गरेर कोठामा बोलाए । राससका पाठक त्यतिबेला कतै भुलेका रहेछन् । पाठकका बारेमा सामान्य सोधपुछ गरेपछि दाहालले हामी दुईजनालाई अघिल्तिर ह्वीलचियरमा बसेको मानिसतिर देखाएर ‘ल तपाईहरुले उहाँको अन्तर्वार्ता लिइदिनुप¥यो’ भने । जनयुद्धमा घाइते भएपछि पत्रकारितामा लागेका सापकोटा र जनयुद्धमै परिवारको एक सदस्य गुमाएको मलाई दाहालले अति विश्वास गरेका थिए ।
यसअघि कहिल्यै कतै नदेखिएका, नभेटिएका झ्याप्प दारीजुँगा पालेका चश्मावाल ती महोदयसित कसरी अन्तर्वार्ता लिने ? उनको पृष्ठभूमि के हो ? विशेषज्ञता के हो ? के विषयमा प्रश्न सोध्ने ? त्योभन्दा ठूलो समस्या थियो भाषाको । हामी दुइटैको अंग्रेजी भाषा गरिखाने माध्यम थिएन । कनीकुथी हिन्दी बोल्नसक्ने म थिएँ, सापकोटा परे फिटिक्कै हिन्दी नबोल्ने । पन्त र अर्का एकजना हिन्दी भाषीले उनको बारेमा छोटो परिचय दिलाए । उनी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सम्वद्ध संयुक्त मोर्चाका उपमहासचिव रहेछन् । उनको खास नाम के थियो थाहा दिइएन तर उपनाम दिइएको थियो साइबाबा । केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले अति गोप्य रुपमा भेटेका महानुभाव यिनै थिए । पत्रकारको कर्म यस्तै हो, सधैँ योजना गरेजस्तो कहाँ मिल्छ र ? कतिपटक तत्क्षण केही प्रश्न बनाउनै पर्ने हुन्छ । यहाँ पनि प¥यो त्यस्तै नै ।
समय कम थियो । भूमिगत भएकाले होला उनीहरु पनि हतारमा देखिन्थे । ‘इन्स्ट्यान्ट नुडल्स’ जस्तो हत्तपत्त होस् भन्ने चाहिरहेको उनीहरुको मुद्राले बताउँथ्यो । ‘नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा हालै सरकार गठन भएको छ, तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?’ पहिलो प्रश्न टुटेफुटेको अंग्रेजीमा मैले फुटाएँ । उनले परम्परागत कम्युनिष्ट नेताकै शैलीमा पहिले केही पृष्ठभूमि बाँध्दै सारमा नेपालमा माओवादी सरकारमा पुग्नुलाई आपूmहरुले उपलब्धिका रुपमा लिएको बताउँदै थिए । यत्तिकैमा ढोका ढकढक ग¥यो । राससका पाठक हामीलाई खोज्दै आएका रहेछन् । ढोका खोल्नासाथ हामी दुई भाइलाई देखेर उनी भित्र पसिहाले । हामी सबै अक्क न बक्क प¥यौँ । मुखामुख गर्न थाल्यौँ । समीर दाहालले तत्कालै स्थितिलाई नियन्त्रण लिँदै सामान्य बनाइहाले । अन्तर्वार्ता त्यहीँ बिथोलियो । भारतीय माओवादी टोली हामीबाट बिदा भयो । हामी पनि बाहिरियौँ ।
अन्तर्वार्ता पूरा नभए पनि मलाई लागिरह्यो भारतीय सरकारले जोडतोडका साथ खोजी गरिरहेका प्रतिबन्धित भारतीय माओवादी नेतालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूताबासमा भेटेको भारत सरकारलाई जानकारी थियो होला कि थिएन होला ? यदि त्यो समाचार तत्काल प्रकाशनमा आएको भए भ्रमणले कुन रुप लिन्थ्यो होला ? प्रचण्डको सरकार नौ महिना अगावै पो ढल्थ्यो कि ? यसैगरी अर्कोतिर लाग्थ्यो, भारतले यतिविधि संशयका साथ हेरिरहँदा पनि प्रचण्डले भारतीय माओवादी नेतालाई कसरी भेट्ने जोखिम मोलेका होलान् ?
समाचार बन्नका लागि जानकारी काफी थिएन । फेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा भारतीय माओवादी भेटे भन्ने समाचार समग्र नेपालकै द्वन्द्वबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको नेपालका प्रत्यूत्पादक अवश्य बन्ने थियो । तै चुप मै चुप । यसबारेमा गोरखापत्र न्युज डेस्क त के सापकोटासित पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।
Posted by Naresh at 9:00 AM 1 comment:
समुन्नत समाजका लागि पत्रकारिता
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास धेरै पुरानो छैन । करिब एकसय वर्ष अघिदेखि नेपालमा पत्रकारिताको अभ्यास हुँदै आएको अभिलेखहरुले पुष्टि गर्ने गरेका छन् । पत्रकारिताको स्वरुपमा नहोला, नेपाली समाजमा सन्देश आदानप्रदान गर्ने माध्यम भने यसअघि हुँदै नभएका होइनन् । प्रविधिको बाक्लो उपस्थितिका वावजूद पनि कतिपय त्यस्ता माध्यमहरु आजपर्यन्त जीवित छन् । पश्चिमतिर कटुवाल कराउने, पूर्वतिर मान्छे मर्दा शंख पूmक्ने जस्ता कार्य आज पनि चलिरहेकै छन् ।
वि.सं. १९५३ मा निक्लिएको सुधासागरलाई पहिलो नेपाली पत्रिका मान्ने गरिएको छ । यद्यपि यसको मुद्रित अंक देख्न पाइएको छैन । नामको आधारले यसलाई धेरैले समाचारपत्र नभई साहित्यिक पत्रिकाको अनुमान गर्ने गरेका छन् । अखबारको हिसाबले चाहिँ वि.सं १९५८ देखि छापिन थालेको गोरखापत्र नै पहिलो नेपाली अखबार मानिन्छ । जो अहिले पनि निरन्तर निस्किरहेको छ । तत्कालीन राणाशासक देवशमशेरको उदारपनामा शुरु भएको गोरखापत्र पछि जनस्तरबाट अन्य अखबार शुरु हुने वातावरण भने वि.सं.२००० को दशकमा फैलिएको राणाविरोधी क्रान्तिले बनाएको थियो । त्यसबेला सम्ममा साहित्यिक र राजनीतिक विषयवस्तु समेटेका दर्जनौँ साप्ताहिक पत्रिका नेपाल र प्रवास (भारत) बाट निक्लन शुरु भइसकेका थिए । वि.सं. २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेपछि नेपाली पत्रकारितालाई जग बसाल्ने अवसर दियो । वि.सं. २००७ चैत २० गतेदेखि औपचारिक रुपमा नेपालमा रेडियो प्रसारण शुरु भयो । वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती कालखण्डमा व्यावसाियक पत्रकारिता अघि बढ्न नसके पनि, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्ने परिस्थिति नभए पनि पत्रकारिता ठप्प रोकिएन । यसैकाल खण्डमा २०४१ माघ १७ गते नेपालमा टेलिभिजनको श्रीगणेश भयो ।
२०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नेपाली पत्रकारिता द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । अखबार, रेडियो, टेलिजिभन समानान्तर रुपमा खुल्दै छन् । अझ इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले अनलाइनहरु दिनहुँ थपिँदा छन् । सूचना विभागको पछिल्लो (२०६७ चैत मसान्तसम्म) तथ्यांक अनुसार नेपालभित्र ४२० दैनिक, २३ अर्धसाप्ताहिक, २ हजार १७४ साप्ताहिक, ३९९ पाक्षिक, १ हजार ९३४ मासिक, २३४ द्वैमासिक, ५१० त्रैमासिक, २६ चौमासिक, ७० अर्धवार्षिक र ८३ वार्षिक गरी ५ हजार ८७३ पत्रिका दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार २०६८ भदौ १२ गते सम्ममा ३९४ वटा रेडियोले सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् भने त्यसमध्ये ३३४ वटाले प्रसारण शुरु गरिसकेका छन् । सोही अवधिसम्ममा ३२ वटा टेलिभिजनले सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेका छन् । यसरी नेपाली पत्रकारिता अहिले धेरै अघि बढिसकेको छ । हजारौँलाई रोजगारी दिने र अर्बौँको कारोबार गर्ने उद्योगमा परिणत भइसकेको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई एकतावद्ध बनाई उनीहरुको पेशागत हकहितको रक्षा, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास विगत पाँचदशकदेखि हुँदै आएको छ । वि.सं.२००७ सालको परिवर्तनपश्चात २००८ सालमा सत्यनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पत्रकारहरु संगठित हुने प्रयास गरेपनि त्यसले निरन्तरता पाएन । त्यसपछि २०१२ चैत १६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई (पूर्व प्रधानमन्त्री) को अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघ गठन भयो । भट्टराई नै अहिले अस्तित्वमा रहेको पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष मानिन्छन् । पञ्चायतकालको उतारचढाव पत्रकार संघमा परेपनि यसले आपूmलाई अविछिन्न रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ । २०४६ को परिवर्तनपश्चात पत्रकारिता क्षेत्रको बहुआयाम देखेर होला पत्रकार संघले आपूmलाई २०५३ असार ११ गतेदेखि महासंघमा परिणत गरेको छ । अहिले महासंघमा ८ हजार १३ जना पत्रकार सदस्य छन् । नेपालभित्र सशक्त पेशागत संगठनका रुपमा आपूmलाई उभ्याएको महासंघ इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्ट (आइएफजे) र इन्टरनेशल फ्रिडम अफ एक्स्प्रेसन एक्सचेञ्ज (आएफइएक्स)सित पनि आवद्ध छ ।
देशभित्र रोजगारीको सीमित अवसरले उकुसमुकुस भएका युवाशक्तिलाई नेपालको विभिन्न मुलुकसित नेपालको श्रम सम्झौताले विदेशिन प्रश्रय दियो । विदेशमा अध्ययन गर्न विगतभन्दा सहज वातावरणले पनि युवाहरु विभिन्न देशमा पुगे । रहँदाबस्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि त्यहीँको स्थायी बासिन्दा बने । युके लगायत कतिपय देशमा नेपालीहरुलाई स्थायी बसोबासको अवसर समेत मिल्यो । एक अनौपचारिक सर्भेअनुसार अहिले सार्क मुलुकबाहिर करिब ३५ लाख नेपाली बसोबास गर्दछन् । नयाँ ठाउँमा नेपाली समुदायको विकास र विस्तारसँगै उनीहरुमाझ सञ्चारको पनि आवश्यकता प¥यो । सन्देश एकबाट अर्कोमा पु¥याउने माध्यम टड्कारो भयो । त्यसैले विदेशमा पनि नेपाली पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रिकाहरुको विकास हुन गयो । साथसाथै ती सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले पनि पेशागत संगठनको अभाव महसूस गर्न थाले । यसरी विदेशमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरुको संगठन बन्न गयो । विदेशमा कति पत्रकार छन् एकिन तथ्याङ्क नेपाल पत्रकार महासंघसित नभए पनि हालसम्ममा अमेरिका, जापान, हङकङ, कोरिया, युएइ, कतार, मलेसिया लगायतमा पत्रकारहरु संगठित भइसकेका छन् ।
करिब एक लाख बढी नेपालीको बसोबास रहेको, चारवटा साप्ताहिक, एक टेलिभिजन, दुई एफएम रेडियो, दर्जनौँ अनलाइन र अन्य प्रकाशनहरु रहेको बेलायतमा पनि पत्रकारहरुले संगठित हुने प्रयास नगरेका होइनन् । सन् २००९ को फेब्रुअरी २१ मा युकेमा कार्यरत पत्रकारहरुको भेलाले शशी पौडेलको अध्यक्षतामा एक आयोजक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई पछि अप्रिलमा बसेको बैठले नेपाली सञ्चारकर्मी संघ, युके नामकरण गरेको थियो । सन् २०१० जुलाई १८ मा बसेको पत्रकारहरुको अर्को भेलाले नविन पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन ग¥यो । सोही समितिले नेपाल पत्रकार महासंघसित समन्वय गरी बेलायत शाखाको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ र महासंघका केन्द्रीय सभापति शिव गाउँलेको उपस्थितिमा यही जनवरी १४ मा पहिलो अधिवेसन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । स्थापनाको छोटै अवधिमा पनि शाखामा अहिलेसम्ममा ३७ पत्रकारहरु आवद्ध भइसकेका छन् ।
सन् १९६० मा स्थापना भएको यति एसोसिएसनको मुखपत्र यतिपत्रलाई बेलायतको पहिलो नेपाली पत्रिका मानिने गरिएको छ । तथापि यो मुखपत्र थियो । यसै दशकमा (सन् १९६९) बीबीसीले लण्डनमा नेपाली सेवा शुरु गरेको थियो । व्यावसायिक पत्रिकाका रुपमा सन् १९९० मा प्रकाशन गरिएको सगरमाथा टाइम्स, सन् २००३ मा शुरु भएको गोरखा मिरर र लण्डन पोस्टले निरन्तरता पाउन नसके पनि २००४ मा शुरु भएको नेपाली सन्देश, २००५ मा शुरु भएको युरोपको नेपालीपत्र, २००८ देखि शुरु एभरेस्ट टाइम्स र २००९ को नयाँ सन्देश भने हालसम्म निरन्तर छन् । नेपाली टिभी, ब्रिटिश सेना मातहतको बीएफबीएस गोरखा रेडियो, बीजीडब्लुएस एफएम तथा अनलाइन पोर्टलहरुले विद्युतीयमाध्यमतर्फ निरन्तरता दिइरहेका छन् । बीबीसी नेपाली सेवाबाहेकको युकेको नेपाली पत्रकारिताको स्थिति व्यावसायिक हिसाबले सन्तोषजनक छैन । नेपालमा जस्तो पत्रकारहरुमाथि शारीरिक दुव्र्यवहार नभए पनि समाचार छापेकै कारण मौखिक धम्की, मुद्दा मामिलाको झमेला भने युकेमा पनि पत्रकार र पत्रिकाले भोग्नु परिरहेकै छ । छापिएको सामग्रीमाथि चित्त नबुझे अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नेपाली समाजलाई बुझाउन सकिएको छैन । अझ त्यो भन्दा ठूलो कुरा त बेलायतको नेपाली समाजलाई नेपाली पत्रकारिताको महत्व बुझाउन सकिएको छैन ।
समाजका लागि पत्रकारिता आवश्यकता हो वा पत्रकारिताका लागि समाज ? प्रष्ट हुन सकेको छैन । समाजमा पत्रकारिताको दीर्घकालिन महत्व र प्रभावका बारेमा समाजसित अन्तत्र्रिmया भएकै छैन । पत्रकारहरुबीच पनि सैद्धान्तिक, व्यावहारिक ज्ञान, सीन र क्षमताको प्रशस्तै अभाव देखिन्छ । त्यही अभावको उपज उनीहरुमा आत्मविश्वासको पनि कमी देखिन्छ । प्रख्यात उद्यमी बारेन बफेटले भनेका छन्, जति पत्रकार काबिल बन्छ त्यति नै समाज राम्रो बन्छ । त्यसैले पत्रकार महासंघ, युके शाखाको अबको ध्येय यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुलाई व्यावसायिक सीपले स्पात र जिम्मेवार कालिगढ बनाउने तथा यहाँको नेपाली समाजसित पत्रकारिताको महत्वका बारेमा ‘कन्भिन्स’ गर्ने हुनुपर्दछ । यदि त्यसो भयो भने शाखाले पहिलो अधिवेसनका लागि तय गरेको समुन्नत नेपाली समाजका लागि जिम्मेवार पत्रकारिता नारा पनि सार्थक हुनेछ ।
(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्)
Posted by Naresh at 8:58 AM No comments:
गोल्ड मेडल थाप्न थाल चोर्नुप¥यो
...ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल.. भन्ने कवितांश कवि लेखनाथ पौड्यालले बोलमाया गुरुङकै लागि लेखिदिएजस्तो लाग्छ । करिब ४० वर्षअघि घरको ‘सपोर्ट’ बिनै रुढीवादी समाजको पर्दा च्यात्दै नृत्यमा नेपाल टप गर्ने उनको जीवन दन्त्यकथा जस्तै लाग्छ ।
त्यसो त उनलाई पनि थाहा छैन कतिबेर कसरी नृत्यको रस बस्यो भनेर । सुवेदार उदवर गुरुङकी कान्छी छोरी उनले चारवर्षको उमेरदेखि पोखरामा बस्न पाइन् । कन्या हाइस्कुलमा पढ्न पाएकी उनलाई यति याद छ आफू ५÷१० वर्षको हुँदा टोलटोलमा राजाको जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो । त्यसमा स्कुलबाट उत्कृष्ट नृत्य लैजाँदा उनी पर्ने गर्थिन् । र, त्यतिबेलादेखि नै उनले नाचेको परिवारले मन नपराएको पनि उनलाई हेक्का छ । भन्ने गर्थे रे, ‘छोरी मान्छे नाच्न हुन्न । कुलको नाक काटिन्छ ।’
काठमाडौँबाट होलिडे मनाउन होला राजारानी पोखरा गइरहन्थे । मनोरञ्जनका लागि उनीहरुलाई कन्या स्कुलको नाच नभइ नहुने । बोलमाया बिना अपूरो हुन्थ्यो कन्या स्कुलको नाच । “अहिले कसरी चर्चित हुने भन्ने छ तर त्यतिखेर चर्चित हुनु पनि इज्जतै गुमाउनु जस्तो थियो” हाल युकेमा बसोबासरत् उनले भनिन् । बाउआमाको पिटाइ सहँदै भए पनि उनले नृत्यलाई छोडिनन् । कक्षा ८ पढ्दा २०२७ सालमा उनले जिल्ला, अञ्चल र राष्ट्रियस्तरमै नृत्य प्रतियोगितामा पहिलो स्थान जमाइन् । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जान उनलाई घरबाट अनुमति दिइएन, बाटो खर्च पनि दिइएन । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । उनी पनि के कम घरबाट आठवटा काँसको थाल चोरिन् र बेचेर बाटो खर्च बनाइन् । उनी भन्छिन्, “गोल्ड मेडल जितेर आउँदा पनि घरबाट स्याबासी पाइएन ।”
स्वर्गीय राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, उनीहरुका आमा रत्न र उनीहरुका पाहुना उनका नृत्यका दर्शक हुन्थे । २०२६ सालतिर होला तत्कालीन राजकुमार वीरेन्द्रको निम्तामा नेपाल आएका १२ देशका राजकुमारहरुलाई नृत्य देखाउँदा बेलायतका राजकुमार चाल्र्स पनि दर्शक भएको उनलाई सम्झना छ । त्यो बेला वीरेन्द्रले ‘ताल प¥यो न्यूरो न्यूरो’ भन्ने गीत गाएको उनी बिर्सदिनन् । २०२७ सालमा रत्नलाई पेटमा चोट लागेको बेला नारायणहिटी दरबारबाटै बोलावट भएर नाच्न गएको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, “कलाकारको सानोमा सानो र माथि माथिसम्म पहुँच हुँदोरै’छ ।”
नृत्यमा नेपाल टप भएपछि उनलाई कलाकारितामै लाग्न मन थियो । फिल्महरुबाट अफर नआएको पनि होइन । तर परिवार भइदियो काँडेतार । तत्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (आरएनएसी) बाट एअर होस्टेस बन्न अनुरोध पनि आएको थियो रे । प्लेन चढ्न डर लाग्ने भएकाले उनले त्यो पनि लत्याइन् । बाउआमालाई थामथुम पारेर केही समय उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अस्थायी जागिर पनि खाइन् । तर त्यहाँ पनि ‘राम्रो होइन हाम्रो मान्छे’लाई राखिएपछि उनी विरक्तिइन् । बाउआमाको जोड हुर्केकी छोरीको विहे गराउनमा छँदै थियो । उनलाई पनि लाग्यो बरु विहे गरेपछि पो कलाकारितामा स्वतन्त्र भएर लाग्न पाइन्छ कि ?
तावाबाट उम्केको माछो भूङ्ग्रोमा । लाहुरे श्रीमान् पनि परे कलाकारिता मन नपराउने । विवाह भएपछि उनलाई निम्तो आयो यूरोप भ्रमणमा जाने । विश्वका ९६ देशका कलाकारले आफ्नो प्रतिभा देखाउने कार्यक्रममा उनले पनि भाग लिनु थियो । तर श्रीमान्ले त्रिभुवन विमानस्थलमा निवेदन दिएछन् मेरी श्रीमती मेरो सहमतिबेगर विदेश जान लागेकाले रोकिपाउँ भनेर । उनले श्रीमानलाई सम्झाइन् र सन् १९७३ मा जर्मन, फ्रान्स, बेल्जियम, स्पेन, युगोस्लाभिया (तत्कालीन), युकेमा नृत्य देखाउँदै तीनमहिना बिताइन् । एभरेस्ट कल्चर ग्रुपले समन्वय गरेको सो टोलीमा २८ नेपाली कलाकार थिए । सन् १९७४ पनि उनी युरोप आइन् ।
बेल्जियमको दरबारमा नृत्य देखाएपछि रानीले सोधिन् रे–कहाँ सिक्यौ यति राम्रो नृत्य ? हुन पनि उनले अहिलेसम्म कहीँ नृत्य सिकेकी छैनन् । जो जति जानेकी छिन् त्यसलाई भगवान र प्रकृतिको देन भन्छिन् । “अहिलेजस्तो स्कुलमा डान्स टिचरहरु हुँदैन थिए, गणेश शेरचन (पूर्व मन्त्री) हरुले स्कुलमा कहिलेकाहीँ ताल सिकाउनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा चेतन कार्कीले केही निर्देशन दिनुभएको थियो । वास्तवमा मेरो गुरु कोही छैन ।” उनले भनिन् ।
खासमा उनको सपना थियो डान्स स्कुल खोल्ने । श्रीमानले मन नपराएपछि त्यो सपना त्यत्तिकै तुहियो । तर उनी श्रीमान र घर (माइती) लाई मात्र दोष दिने पक्षमा छैनन् । उनीहरुभन्दा पनि त्यतिबेलाको समाजलाई दोषी देख्छिन् उनी । एकपटक गण्डकी अञ्चलका तत्कालीन अञ्चलाधीश गमबहादुर गुरुङले गाउँफर्क अभियानका क्रममा नृत्य देखाउन उनलाई स्याङ्जा लगेका थिए । कार्यक्रममा उनको नाम बोलाउन लागिएको थियो । उनी आफ्नो पालो पर्खँदै ब्याक स्टेजमा थिइन् ठीक त्यहीबेला पछाडिबाट बाउआमाले तानेर गाडीमा राखी पोखरा ल्याएको उनी कहिल्यै भुल्दिनन् । “कुटाइ खाने, पिटाइले खुट्टा सुन्निने त कति भयो कति” उनले थपिन्, “अहिलेजस्तो समाज भए म धेरै माथि जानसक्थेँ” अझ उनलाई लाग्छ, “मजस्ता र मभन्दा प्रतिभाशाली कति कलाकार त्यत्तिकै मरे होलान् म पो आँट गरेर गोल्ड मेडलिस्टसम्म भएँ ।”
राजारानीले कतिलाई तिम्रो चाहना के छ भनेर सोधेको, पढाएको पनि नसुनिएको÷नपढिएको होइन । त्यसैले उनलाई सोधियो, ‘तपाईलाई चाहिँ राजपरिवारले तिम्रो के इच्छा छ भनेर सोधेनन् ?’ “खासमा हामी स्वतन्त्र कलाकार हुन सकेनौँ । सिडियो, आर्मी, पुलिसका चिफहरुले आफ्नो पूmली बढाउन मात्र हामीलाई प्रयोग गरे । हामीलाई केही थाहा थिएन । नाच देखाउन पाए पुग्यो ।”
आफ्नो सोचाइको जीवन अधकल्चो भएपनि उनी अहिले अरु कलाकारलाई प्रोत्साहन दिन लागिपरेकी छिन् । पोखराको हिमाली साँस्कृतिक परिवार, पोखरेली युवा सँस्कृति संघ, झलकमान गन्धर्व ट्रष्ट, सेती गंगा सत्यसाई केन्द्र, साइ विद्याश्रम, नदीपुरमा आवद्ध रहेर उनले कलाकारहरुलाई उत्पे्ररणा दिइरहेकी छिन् ।
अहिलेको पुस्तालाई आफ्नो कला खुलेर राख्न, मिडियाहरु धेरै भएकोले चर्चित हुने मौका पाएकोमा भाग्यमानी ठान्ने उनी कलाकारहरु अनुशासित चाहिँ आफ्नै पालामा भएको ठान्छिन् । “अहिले छिटो नाम र दाम कमाउने भन्ने छ अनि राजनीति पनि” उनले भनिन् ।
पहिले आफ्नो प्रतिभाको कदर नभए पनि अहिले नयाँपुस्ताले आफूलाई कतिपय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाउँदा पुरानो दिन सम्झेर बोल्दाबोल्दै भक्कानिँदै रोएको सुनाउन पनि उनले छुटाइनन् । एकै क्षेत्र भए पनि गायक, संगीतकार अमर हुने तर नृत्यकार गुमनाम हुनुको कारण खोल्दै उनले भनिन्, “नृत्यकारको जीवन लामो छैन गालामा रगत होउञ्जेल मात्र हो उमेर गएपछि कसैले स्टेजमा बोलाउँदैन ।”
Posted by Naresh at 8:55 AM No comments: